HomeWararka MaantaMaxaa ku soo kordhay Dagaalka Dhuusomareeb ee u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlu-Suna
Saraakiil ka tirsan ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna ayaa ka mid noqday tiro dad ah oo lagu dilay dagaaladii saaka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb caasimada Galmudug
Waxaa ilaa iyo hadda la xaqiiyay geerida Cabdulqaadir Alamagan oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee Wasiirka Waxbarashada Galmudug & Cabdalle Jaamac Indho maleh oo ahaa Sarkaal ka tirsan Ciidamada Ahlusunna ee saaka weerarka soo qaaday,
Sidoo kale waxaa jira tiro madaafiic ah oo ku dhacay Xaafado katirsan Magaalada Dhuusmareeb, kuwaasoo waxyeelo ay kasoo gaartay dad Shacab ah, sidoo kale guryo farabadan ay ku burbureen.
Cumar Da’uud oo ka mida saraakiisha ciidanka Madaxtooyada Galmudug kana mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ayaa warbaahinta kula hadlay cirifka waqooyi ee Dhuusamareeb isagoo sheegay inay magaalada ka saareen xoogaga Ahlusunna, isla markaana ay ku daba jiraan firxadkooda.
Wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in dhinacyada ay gurmadyo kala duwan helayaan, waxaana ciidamada dowladda degmda Guriceel uga yimid Ciidamo isugu jira Gorgor iyo kuwa Booliska ah, halka Xoogaga Ahlusunna ay Ciidamo horleh uga yimaadeen dhinaca degaanka Bohol.
Dhinaca kale, Xarunta Taliska Ciidamada Gorgor ee Dhuusamareeb ayaa la isugu keenay 28-maxaabiis ah oo Ciidamada Dowladu ku soo qabteen dagaalka ay kula jiraan Kooxda la baxdey Ahlusunna. Maxaabiistan ayay todobo ka mid ah yihiin rag dhaawacyo qaba oo looga cararay goobihii lagu dagaalamey.
Tacshiirad goos goos ah ayaa weli laga maqlayaa duleedka magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo ay weli dagaalo ka socdaan, iyadoo saraakiisha ciidamada galmudug ay wacad ku mareen ineysan dagaalka ka soo laaban doonin ilaa ay Galmudug ka ciribtiraan kooxda Sufo.